Vanhu 59 vakafa, vanopfuura 1000 vasipo semafashama ane njodzi anoparadza Germany
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Vanhu 59 vakafa, vanopfuura 1000 vasipo semafashama ane njodzi anoparadza Germany
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mazuva emvura zhinji akakonzera mafashama makuru kumadokero kweGerman svondo rino.
Vanhu makumi matatu vanonzi vakafa mudunhu reNorth Rhine-Westphalia.
Vanhu 29 vakaurayiwa muRhineland-Palatinate.
Vanofungidzirwa vanhu chiuru nemazana matatu vanoramba vasipo mumafashama eGerman.
Vanenge vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vakaurayiwa uye vanopfuura chiuru vakashaikwa kuGerman semhedzisiro yemafashama ane njodzi akaparadza nzvimbo yekumadokero kwenyika.
Mazuva emvura zhinji akakonzera mafashama makuru kumadokero kweGerman svondo rino, uye huwandu hwevakafa hwakakwira kusvika ku59 nhasi.
Sezvo mapurisa, masoja nevamwe vashandi vekubatsira vanoita basa guru rekununura, vanhu makumi matatu vanonzi vakafa mudunhu re North Rhine-Westphalia, nepo vamwe makumi maviri nevapfumbamwe vakawanikwa muRhineland-Palatinate.
Vanhu vanofungidzirwa kuva chiuru nemazana matatu vanoramba vasipo, sezvo vanodarika chiuru chemapurisa, vanodzima moto, masoja nevamwe vashandi vekuyamura njodzi vachipepeta matombo muRhineland-Palatinate neNorth Rhine-Westphalia - nyika mbiri dzakanyanya kurohwa - pamwe nevakapoterera Baden-Wurttemberg . Maherikoputa gumi akaendeswa panguva yekununura, aine mamwe matatu akashongedzerwa newatch tambo dzakagadzirirwa kuenderera mberi nekutsvaga pakati pehusiku.
Vakuru veGerman vachiri kushanda kudzorera gasi, magetsi nemvura munzvimbo dzakakanganiswa, nepo Federal Agency yeTechnical Relief (THW) yeGerman iri kugadzirira kuvaka nzvimbo dzekurapa mvura kwenguva pfupi mune dzimwe nzvimbo.
Mushure mekunaya kwakanyanya, dhamu reSteinbachtalsperre padyo neguta reEuskirchen muNorth Rhine-Westphalia iri panjodzi yekurega nzira. Vakuru vemunharaunda vakayambira mune ye Facebook kutumira kuti "kukundikana kamwe kamwe… kunofanirwa kutarisirwa chero nguva," kunyangwe paine kuyedza kuchengetedza chimiro chakamira. Dzimba dzinosvika nhanhatu dzakapunzika, uye dzimwe makumi maviri neshanu dziri munjodzi yekudonha.
Chancellor weGerman Angela Merkel, uyo ari kushanya kuUS kumusangano neMutungamiri Joe Biden, vakati mafashama aya "ane njodzi," achiwedzera kuti rubatsiro ruri munzira kune avo vakakanganiswa.
"Mifungo yangu iri pamwe newe, uye iwe unogona kuvimba kuti masimba ese ehurumende yedu - yemubatanidzwa, yedunhu nenharaunda - pamwe chete ichaita zvese pasi pemamiriro akaomesesa kuponesa hupenyu, kurerutsa njodzi uye kubvisa kushushikana," akadaro Merkel.
Mutungamiri weUS, Joe Biden akapawo runyararo kune vakashungurudzwa achiti, "Idambudziko uye moyo yedu iri kumhuri dzakarasikirwa nevadikani."
Germany handiyo yega nyika yakarohwa nemamiriro ekunze asina kunaka. Mafashama akarovawo Belgium, Luxembourg neNetherlands. Vapfumbamwe vanonzi vakaurayiwa muBelgium, sekureva kwenhau yenhau yeBelga, nepo vakuru veDutch vakurudzira zviuru zvevagari kuti vatize nzvimbo dzine mafashama emvura.